GERANIUM: QARSOODIGA DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Maqaalkani waxa aanu kuu sheegi doonnaa wax walba oo ku saabsan geraniums qolka (oo sidoo kale loo yaqaan "kalachik"), sida: sida loo daryeelo warshadkan, waxa ciidda lagu beerayo iyo sida loo doorto dheriga saxda ah.
Ha ilaawin inaad ka hadasho hababka faafinta pelargonium.
Ma taqaanaa? Qoyska Geranium waxay leeyihiin qiyaastii 800 nooc waxayna ku badan tahay dabiicada koonfurta Afrika iyo Australia.
Noocyada gogol-xannaanaynta guriga dhexdiisa
Ereyga "geranium" wuxuu ka yimaadaa Giriigga "geranion" ama "geranios", wuxuuna tarjumaa "crane" (midhaha dhirta geedkaan waxay u egtahay gogosha gaaska).
Dhirta lafteedu waa geed ku dari karto 60cm, waxaa jira labo nooc: ubax ama caraf. Marka labaad, marka ubax, waxay u ekaan kartaa urka tufaax, xayawaanka, ama xitaa xawaashka.
Home geranium waa wax aan hoos u dhicin si ay u daryeelaan, sidaa daraadeed iyadu waxaa si weyn loo aqbalaa by muusika gurigeeda iyo ku faraxsan ubax this qurux badan. Geraniums waxay u barteen guryahooda, waana inaad isku daydaa inaad hesho ubaxkan si uu u dhaawaco.
Laakiin, inkastoo ay fududahay, waxaa jira sifooyin dhowr ah ee germanyum sii kordhaya, taas oo loo baahan yahay in la tixgeliyo:
Iftiin Geranium aad ayuu u jeclaa iftiinka, sidaas darteed waxaa inta badan lagu dhejiyaa daaqadaha, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo daaqada ay ku gali karto geranium (dhinaca koonfureed waa ku haboon yahay).
Waa muhiim!Xilliga xagaaga, kama bixi kartid ubaxa qorraxda tooska ah.
Heerkulka Geranium ma aha mid aad u qiimo badan kulaylka, laakiin, si kastaba ha ahaatee, wakhtiga qaboobaha, qolku waa inaanu qaboobin (aan ka yarayn +10 S). Haddii aad rabto in ay Bloom sanadka oo dhan, waa inaad siisaa iftiin (jiilaalka - iftiinka) iyo ku rid meel diiran.
Waraabinta Ka waraabinta inta badan waa lagama maarmaan, laakiin hubi in biyaha dheriga uusan joogsanayn, sida xididdada geedka ay bilaabaan kallana iyo geranium u dhinto.
Waa muhiim! Mishiinka jilicsani ma awoodo. Ubax Tani uma baahnid hawo qoyan, habkani sida kaliya ayuu u dhibaa.
Xaaladaha cimilada ee geranium
Tan iyo markii geranium ka yimid Koonfur Afrika, markaa, si waafaqsan, waa inaad abuurtaa jawi la mid ah gurigaaga. Dabcan, tani macnaheedu maaha in ay tahay lagama maarmaan in si joogta ah loo ilaaliyo heerkulka qolka 30 30S oo buuxi jinsiga biyo, sida roobka kulaylaha.
Waa ku filan inaad ciidda ku haysato qoyaanka qoyaanka iyo si ay u bixiso iftiin ku filan kubadaada yar. Heerkulka ugu sarreeya ee ubaxa waxay ka socotaa +10 ilaa +30 digrii. Baahida loo qabo geedi-socodka nalalka wanaagsan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in waddankeeda uu jiro tirada ugu badan ee qoraxda sanadka hal sano ah.
Waa muhiim! Haddii ay jiraan wax yar oo iftiinka qorraxda, nalalka caadiga ah ee ku habboon ubaxa waa mid qumman.
Ha ku badbaadin, doorashada dufka for geraniums
Markaad dooranayso dheriga geedka "geranium", waxaa haboon inaad xusuusato macluumaadka aan kor ku xusanay, sida: "Sida loo kubbiyo kubbadda guriga". Waxaad horayba u ogtahay in geranium uu u baahan yahay waraabin joogto ah, inkastoo ay tahay in biyuhu aysan "istaagin" dheriga. Sidaa darteed, marka aad dooranayso dherar waa qiimo dhimis mudan.
Haddii la barbardhigo dheryaha caagagga ah iyo alaabta laga soocay dhoobo la dubay, markaa ugu dambeyntii waxay noqon doontaa mudnaanta, maadaama ay ciidda si deg deg ah ugu koraan. Dheriga waa inuusan noqon mid aad u ballaadhan, haddii kale waxaad halis u tahay inaad sii kordhiso geedka halkii ubax yar yar. Hal warshad waa ku filan dherer leh dhexroor 14-15 cm iyo dherer ah ugu yaraan 10 cm.
Waa maxay ciidda loo baahan yahay geedka geraniums, bacarimis iyo geedo loo yaqaan "grafting"
Hadda waan kuu sheegi doonaa maxay tahay dhulku jacaylka jacaylka. Xaaladdan, mar kale, annagu waan caawinaynaa aqoonta aan ka baranay cutubkii hore. Waa muhiim inaad xusuusato laba qodob oo muhiim ah:
Carrabku waa inuu dabacsan yahay oo aan la isticmaalin;
Nooc waa inuu lahaadaa waxyaabo dheellitiran oo dheecaan leh.
Waxaa jira noocyo dhowr ah oo carrada ah oo si fiican loogu talagalay geraniums:
Waxaan isticmaalnaa qoryaha caadiga ah, oo lagu iibiyo dukaamo quruxsan, oo lagu daray dhoobo ballaaran, oo la dhigo hoose ee dheriga;
Isku dar ah ciid ah madow oo leh webiga webiga iyo quraarad ganaax, kaas oo la dhigayaa hoose ee dheriga.
Halabuurka dhulka "laga soo dukaamaysto" waa inuu ka mid yahay peat, kaas oo looga baahan yahay geedka.
Waa muhiim!Inkasta oo ay biyo fiican ka soo baxaan, dhulka dheriga ah wuxuu u baahan yahay in si xawli ah looga furo si looga fogaado kallana roota.
Tag doorashada ee bacriminta for geraniums. Bacriminta caadiga ah ee dukaanka ubaxa ah waxaa ku jira fosfooraska, potassium, nitrogen iyo walxaha raadraaca. Looma samayn wax ka badan 2 jeer bishii.
Waxaa ugu wanaagsan in la quudiyo tallaal yar ka dib qorrax dhaca, ama dhajinta dheriga ee hooska. Ha isticmaalin bacriminta dareeraha ah haddii ciidda ay qalalan tahay. Biyaha hore u sii daa ubaxa. Waa muhiim inaad xusuusato taas bacriminta organic cusub aan la isticmaali karaahaddii kale ubax ayaa qalalan.
Hadda waxaan u jeednaa tixgelinta sida loo abuuro ubaxa dhirta.
La qaboojinta jelanium - Tani waa qayb ka mid ah qaliinka ka baxsan dhirta mid kale. Tani waxaa la sameeyaa si loo helo ubaxyo midabyo kala duwan / ur ah hal baadiyaha, ama sameynta taaj qurxin.
Dhirta kaliya dhirta xoog leh ugu yaraan 1 sano jir. Tani waxaa la sameeyaa xilliga gu'ga marka kubbadu koraan si deg deg ah. Waa muhiim in la sameeyo wax kasta oo sax ah oo sax ah sida waafaqsan tilmaamaha lagu soo bandhigay oo hoos lagu muujiyay.
Samee V-cut on stock ah. Waa inay ahaato mid siman, siman oo ka yar jeexnaanta stock, iyo dhererka jajabka iyo qaybta la gooyey waa inay noqoto 2 sentimitir.
Geli cutarka diyaarsan ee gawska la helay, sida ku cad sawirka.
Sida aad arki karto, masiibada waa in ay leedahay kelyo nool oo ku xigta gooyaha.
Grate iyo rootstock isku dhafan si dhammaan qaybaha of asliga ah ku habboon ugu yaraan hal dhinac. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad dooratid dhexroorka isku mid ah ee asliga ah ee jirida iyo stem.
Waa muhiim!Waa inaadan isticmaalin goynta weyn ee dhexroorka ka badan kaydka.
Sida biyaha loo yareeyo
Ubaxyada Potted waa in la waraabiyaa inta badan ku filan, gaar ahaan xilliga diiran, marka firiryada ubaxyada ama koritaanka degdeg ah dhacdaa. Inta lagu jiro "naso", xilliga qaboobaha, xoojinta waraabinta ayaa la yareeyaa, ka dibna dhulka ka dhigaya mid qoyan.
Haddii aad ku aragto caaryada cawska caleemaha ama urta dabeecadda - tani waa xad dhaafka qoyaanka dheriga. Xaaladdan oo kale, waa inaad sugto ilaa ciidda la qalajiyo oo aadan biyaha ku darin ubax, ama ku bedelida germanyum meel cusub oo qallalan.
Waxaa haboon in la xusuusto in dhul aad u qallalan loogu talagalay duubka uusan noqon karin sida cabsi leh qoyaan xad dhaaf ah, kaas oo ku xayiran carrada. In cimilada kulul, pelargonium waxaa la waraabiyaa hal mar maalintii. Heerkulka dhexdhexaadka ah iyo uumiga yar, waraabinta waxaa la sameeyaa labadii maalinba mar.
Tilmaamayaasha xoqista geraniums
Hadda waxaan eegnaa sida loo leexiyo kubadaha.
Geranium waa in la gooyaa, iyada oo aan loo eegin xajmiga iyo da'da. Tani waxaa loo sameeyaa si loo kordhiyo tirada ubaxyada.
Marxaladda koowaad ee manjooyin waxay dhacdaa xilliga qaboobaha. Nidaamkani wuxuu kubada ku caawinayaa ilo badan oo loogu talagalay in lagu guulaysto si loogu guulaysto gobolka.
Waxaan bilaabeynaa in la gooyo oo kaliya ka dib markii jinsiga uu si buuxda u jajabiyay: waxaan ka jaray kala badh dhererka ubaxa (tani waxay noo ogolaanaysaa in aan siinno iftiin badan ubaxyada xididka iyo in la yareeyo fursada caabuqa by fungi). Haddii jeexjeexa wakhtigii uu bilaabmay inuu madow noqdo, waxay u baahan yihiin in la gaabiyo.
Dib-u-samaynta soo saarey dhammaadkii Febraayo ama horraanta Maarso. Tani waxay lagama maarmaan tahay haddii pelargonium ka badan jiilaalka si xoog leh u fidiyo.
Baahida loo qabo geedka geranium boodh af badan, taas oo ka hor intaan qalliinnada la nadiifin karin xalkeeda. Goynta waxaa loo sameeyaa si ka baxsan caleenta caleen.
Ubax gooyaa iyo caleemaha la qalajiyey ayaa ku xiran manjooyin. Xaaladdan oo kale, maaha oo keliya inaad baadiyaha ka dhigto kuwo soo jiidasho leh oo yaryar, waxaad ka caawinaysaa dhirta si ay ula qabsato dhibaatooyinka suurtagalka ah, oo yareeya khatarta ah inay ku dhacdo fungus on qaybo yar yar.
Hababka Nidaamyada Lagu Hayo ee Geranium
Halkan waxaan ku imaanaynaa marxaladda kama dambaysta ah ee maqaalka - dhalmada. Geranium waxaa lagu faafin karaa labo siyoodh oo: abuur iyo gooyn. Oo hadda waxaan kaa caawin doonaa inaad qiimeyso qadarinta iyo khasaarooyinka hab kasta.
Sidaas, waxaad heysataa miraha miraneum waxaadna u baahan tahay inaad hesho meelo qurux badan oo iyaga ka mid ah. Aan ka bilowno waxaad u baahan tahay inaad ogaatid ka hor intaanad bilaabin:
Xulo geedka beerista;
Moments of transplant.
Ugu fiican Waqtiga beerto waa xilliga uu dhirta uu yahay nasasho (bilowga jiilaalka - dhexda guga).
Marka xigta waxaad u baahan tahay substrateka saxda ah ee dhulka. Xaaladdan oo kale, qumman isbarbar dhiga + ciid + peat (ee saamiga 2: 1: 1). Ma joojin doonto biyaha, iyo peat waxay siin doontaa nooca quudinta dhirta kalluunka.
Kadib xulashada ciidda waa u qalmaan diyaarintaada abuurka. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu daaweeyaa epin ama zircon, ka dibna lagu qooyey ilaa 3 saacadood biyaha heerkulka qolka.
Seeds iyo ciidadu diyaar bay u yihiin - tagaan inta ugu badan degitaanka. Waxaan ku faafin ciidda leh dhumucdiisuna tahay 0.5 cm, ku rid abuurka on top iyo cover daboolka. Waxaan ku ridaa sanduuqa leh abuurka qol dhalaalaya leh heerkul ah +20 digrii.
Warshadu waxay ku dhexjiraan hal toddobaad iyo badh ka dib markaad beertid. Heerka koritaanka wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood: noocyada kala duwan ee geranium, heerkulka qolka iyo mudada kaydinta.
Ka dib marka caleen ka muuqato warshad dhalinyaro ah 3-4 caleemo, waxaad u baahan tahay inaad soo saarto beerashada geraniums dheriga. Waa muhiim in si sax ah loo jebiyo xididdada ubaxyo dhowr ah oo aan wali wakhti u helin inay gurguuraan. Qaado digsi cusub oo leh dhexroorka sare ee aan ka badnayn 10 cm.
Habka faafinta abuurka waa mid dheer oo shaqeynaya. Ma aha mid ku habboon qof walba, maadaama uu u baahan yahay fiiro gaar ah iyo waqtiyada kama dambaysta ah. Qaybta soo socota, waxaan eegeynaa habka faafinta by gooynta, taas oo loo isticmaalo wax badan oo ka badan miraha.
Dad badan ayaa ogyahay in jelanium uu ugu fudud yahay inuu ku faafiyo by gooyn, laakiin si adag cidna kuu sheegi doonaa tilmaamaha faahfaahsan. Hadda waxaan ku baraynaa sida loo soo celiyo kubbadda yar si ay u qaadato xidid iyo koraan meel cusub.
Transplantation of gooyn waa la fuliyaa dayrta hore, ka dib markii ubax.
Waxaan jarjarey dherer xoog leh oo caafimaad leh 8-14 cm oo dheer, waxaanu jarjarnaa jarjaran leh (waxaad isticmaali kartaa dhismaha mid) oo ka hooseysa hoosta.
On gooyn gooyaa ka tago 2-3 caleemo sare, intiisa kale waxaa la jaray.
Goynta waxaa la dhigayaa xal of kiciyaha ah ee formation of xididdada (haddii ay jirto). Maqnaanshaha xalka, fursada ah biqilka guul ah hoos u dhaco, laakiin ma baaba'aan gebi ahaanba.
Ku shub carrada ku habboon dherer leh dhexroor qiyaastii 10 cm; waxaan ku samaynaynaa qalimaan leh qalin iyo abuur soo bax.
Hadda waxaan u baahannahay inaan soo saarno booga jarista. Si arrintan loo sameeyo, inta badan, isticmaal biyo.
Waa muhiim! Habkani ma ku haboon yahay royal yurub, sababtoo ah kala duwanaanta noocani ma haysto wakhti ay ku qaadato xididka oo kaliya qudheeda.
Geedka dhoobada ayaa lagu daraa biyaha si looga hortago horumarinta cudurada. Oo markii ay biqil ka qaadatay xididka, waxaa lagu beeray dheriga dhulka iyo ka dibna lagu daryeesto sida geedka qaangaarka ah.
Kadib markaad aqriso maqaalkan, waxaad baratay sidii aad ugu daryeeli lahayd kubad yar guriga. Waxaan kuu sheegnay fursadaha taranta ee geraniums, sida loo gooyo baadiyaha iyo goorta la sameeyo. Sharaxay sifooyinka daryeelka ee geedkan quruxda badan. Hadda waxaa hubaal ah inaad awoodi doontid inaad qaadatid dheriga iyo cirridka lagaa jarayo lagana yaabo inaad hubiso in wax kasta oo aad u baahan tahay.